I-china abenzi bokulinganisa idivayisi yokushisa UChapman
Isikhunta CHA. I-CPM-181013
Inqubo Yokuqeda Ubuso VID21
Izinto zepulasitiki PC + ABS
Ingxenye isisindo 23g
Usayizi wengxenye 125.00 X 63.00 X 22.00mm
Usayizi isikhunta 346 X 396 X 337mm
Ingxenye Igama Isibhamu sokulawula ukushisa
Isikhunta Cavity 1 + 1
Isikhunta Material S136
Isikhunta Isikhathi Sesikhathi: Ama-28's
Ibanga: Ukusetshenziswa okuyisisekelo kwama-thermometer e-infrared kukala ukushisa kwesihloko ukude. Idivayisi inenzuzo ezimeni lapho kunzima khona ukufinyelela entweni ukuqopha izinga lokushisa.
Isibonelo, i-thermometer ye-IR ingasiza lapho ulinganisa izinga lokushisa lamayunithi womoya ovame ukufinyeleleka. Ungasebenzisa futhi i-infrared thermometer ukuqapha ukusebenza kwezinhlelo zokupholisa izinjini noma ukuthola izindawo ezidle kakhulu kuzinhlelo zikagesi namapaneli anokufinyelela okulinganiselwe.
Okuyingozi: Ukukala izinga lokushisa kude kunezinzuzo zako. Akuwona wonke amazinga okushisa angalinganiswa ngokuxhumana ngqo nawo. Esinye sezibonelo ezinjalo ukubasa imililo.
Izicishamlilo zivame ukusebenzisa i-IR thermometer ukukhomba izindawo ezidla lubi uma kunomlilo. Lawa madivayisi abenza bakwazi ukuthola imiphumela enembile ngaphandle kokubeka izimpilo zabo engcupheni.
Olunye uhlelo lokusebenza lokuthinta ama-thermometer akuqaphelanga imishini yezimboni njengama-boilers, amaziko, namapayipi enqubo yokushisa okuphezulu. Ngala mathuluzi aphathwayo, abasebenzi bangakwazi ukubheka okusobala kwalezi zinhlelo ngamazinga okushisa aphakeme ngaphandle kokuxhumana ngqo.
Ukukala amazinga okushisa ezindaweni ezinobuthi noma ezinobungozi kungenzeka ngalezi zinto. Kodwa-ke, ukuthola i-thermometer eyi-IR efanelekile elinganiselwe isibonelo esifanele kubalulekile ekufundweni okunembile kokushisa kunoma yikuphi kwalolu hlelo lokusebenza.
Ukunyakaza: Ama-thermometer e-IR nawo yihadiwe lokuzikhethela lokulinganisa izinga lokushisa lezinto ezihamba njalo. Njengoba lawa madivayisi ephendula kakhulu, akukho okungabambezeleka ekubhaliseni umehluko kuthempelesha. Ngakho-ke, ama-thermometer e-IR alungele ukukala amazinga okushisa wezinto ezihambayo ngoba ijubane lento alisho imiphumela.
Izibonelo zingabandakanya ukukala izinga lokushisa kwamabhande okuhambisa endaweni yokulungisa izinto, imishini ehambayo, ama-roller, nezinye izinto ezihambayo lapho kudingeka khona ukulawula izinga lokushisa.
Langaphambilini Umshini we-POS wekhadi lesikweletu
Olandelayo: Isixhumi se-pin esingu-34 no-4